Food မဂ္ဂဇင်းမှ Wutyee Food House ပုံရိပ်များ | Wutyee Food House
December 30, 2011 by chowutyee Wutyee Food House ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အားပေး နေကြသော ညီအစ်ကို မောင်နှမ များအားလုံးကို ၂၀၁၂ နှစ်ကူးမှသည် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြှေ့ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း ပို့သလိုက်ပါတယ်။
Posted in အခြား အကြောင်းအရာများ | 20 Comments	20 Responses
on December 31, 2011 at 10:06 am | Reply Mya
Food Magazine က၀တ်ရည်ထုတ်တာလား။ အိုင်ဒီယာလေးကောင်းလိုက်တာ။ ရန်ကုန်ေ၇ာက်၇င်ဝယ်ဖတ်မယ်နော်။ အောင်မြင်ပါစေ။
on January 9, 2012 at 12:21 am | Reply chowutyee
Food Magazine က ၀တ်ရည်ထုတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ၀တ်ရည်က ဟင်းချက်နည်းတွေနဲ့ တခြားဆောင်းပါးတွေပါ ရေးတာပါ။ ၀တ်ရည်က Food Magazine မှာ အယ်ဒီတာပါ… ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော်..🙂
on December 31, 2011 at 12:31 pm | Reply aungzaw
Thanks, I will buy these magazine when going back to Yangon.
on January 2, 2012 at 1:29 pm | Reply win
on January 17, 2012 at 9:55 am chowutyee
on January 9, 2012 at 12:22 am | Reply chowutyee
Thanks Ko Aung Zaw!🙂
on January 3, 2012 at 2:32 am | Reply Wah Wah
Thanks Wah Wah!😛
on January 3, 2012 at 5:35 am | Reply nandar
I wanna buy it. thanks
on January 9, 2012 at 12:24 am | Reply chowutyee
Thanks par Nandar😀
on January 3, 2012 at 7:12 pm | Reply ခင်ယမုံ
on January 9, 2012 at 12:27 am | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပါ မခင်ယမုံ။ အမြဲအားပေးလို့လည်း ၀တ်ရည်က ကျေးဇူးပါနော်။ Magazine မှာ လစဉ်ထည့်တဲ့ဟင်းတွေကိုလည်း Wutyee Food House ၀က်ဆိုက်မှာ ပြန်မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ Thanks again!🙂
on January 4, 2012 at 3:15 am | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ဝတ်ရည်ရေ စာအုပ်အပြင်အဆင်လေးက တကယ်ကိုကောင်းတယ်
အဲ အထဲက ကင်နည်း ချက်နည်းတွေကတော့ အထူးတလည် ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းပြီးသားဆိုတော့ စာအုပ်လေးက သိမ်းထားဖို့ အရမ်းတန်တာဘဲ။
ဆက်လက်ပြီး အောင်မြင်ပါစေ ဝတ်ရည်လေးရေ…
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေနော်
on January 9, 2012 at 12:29 am | Reply chowutyee
Happy New Year Ma Chaw!!! Thanksalot..🙂
on January 5, 2012 at 4:40 pm | Reply Cho Wut Hmone
good job….my twin… nice writing and yummy receipts….
on January 9, 2012 at 12:31 am | Reply chowutyee
heeee Thanks my lovely twin!🙂
on January 8, 2012 at 2:42 pm | Reply theingi
on January 9, 2012 at 12:41 am | Reply chowutyee
Thanksalot Ma Theingyi!🙂
on January 17, 2012 at 8:48 am | Reply တယ်ရင်း
အစ်မရေးတင်ထားတဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေထဲက ဟင်းတွေကို အစ်မ အကုန်ချက်တတ်လား ဟင်?????
on January 17, 2012 at 9:54 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ ဒီ WutyeeFoodHouse မှာတင်ထားတဲ့ဟင်းတွေရော၊ Magazine မှာထည့်တဲ့ ဟင်းအားလုံး ၀တ်ရည် ကိုယ်တိုင် ချက်ထားတာပါ။ ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ပြီမှ ချက်နည်းတွေကို သေချာရေးပြီ ပြန်မျှဝေပေးတာပါ။ စာအုပ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်..😀